पटक पटक शिक्षक परिवर्तन हुनुहुदैन –कुमार मानन्धर - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
पटक पटक शिक्षक परिवर्तन हुनुहुदैन –कुमार मानन्धर
–कुमार मानन्धर, प्रिन्सिपल, काभ्रे उच्च मा.वि., बनेपा बुडोल
काभ्रे पनौती नपा–१, चौकोटमा माता रत्नमाया र पिता पूर्णलाल मानन्धरका छोरा कुमार मानन्धरको २०२७ असार २० गते जन्म भएको हो । ०४८ सालदेखि शिक्षण क्षेत्रमा लाग्नुभई ०५१ सालदेखि काभ्रे माविमा अध्यापन थाल्नभुएको हो । ०६१ सालदेखि काभ्रे उच्च मावि, बनेपामा प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको शिक्षा प्रणाली र शिक्षामा देखिएका प्रवृत्ति, समस्या र समाधानका विषयमा रेडियो एबीसी एफएम ८९.८ मेगाहर्जद्वारा हरेक शनिबार साँझ ७ देखि ७ः३० बजेसम्म प्रसारण हुने शिक्षा सरोकार कार्यक्रममा प्रिन्सीपल मानन्धरसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश काभ्रे टाइम्समा प्रस्तुत गरिएको छ ।
० मुलुकको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्दै शिक्षामा परिमाणात्मक उपलब्धी ल्याउन कसरी सकिन्छ ?
राज्यको शैक्षिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन शैक्षिक नीति नियम सफल र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । हालको शिक्षामा सुधार ल्याउन वैज्ञानिक ढंगबाट समय सापेक्ष विश्व बजारमा बिक्ने शिक्षानीति ल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा रोजगारीमूलक व्यवहारिक र जीवनको उपयोगमा आउने शिक्षाले नै परिमाणात्मक उपलब्धी ल्याउन सक्छ ।
० हाम्रो देशको शिक्षामा परीक्षा प्रणालीलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ? सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के के होलान् ?
हाल विद्यमान रहेको परीक्षा प्रणाली लिखितलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसलाई बढी जोड दिनुको विकल्पमा वैज्ञानिक तरिकाको सीपमूलक, दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने परीक्षा प्रणालीको विकासले आम नागरिकको शैक्षिक स्तर माथि उकासिने जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भई मुलुकमा आर्थिक सामाजिक विकास सम्भव छ ।
० काभ्रे उच्च मावि, बनेपाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
काभ्रे उच्च मावि बनेपाको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त राम्रो छ । यसकारण भन्न सकिन्छ मुलुकको निजी विद्यालय भइकन नमूना संस्थाको रुपमा विकास भएको मान्न सकिन्छ । पटक पटक जिल्ला र राष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट भएको छ । राष्ट्रिय हीतलाई मध्यनजर गरी चेतनशील दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न सकेको छ ।
० वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन उपयोगी सीपमूलक हुन नसक्नुको कारणहरु के हुन सक्लान् ?
वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन उपयोगी सीपमूलक हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै परम्परागत विधिमा सरकारी शैक्षिक नीति हुनु नै हो । राम्रो शिक्षा अवधारणाको कमी, शिक्षा सीपमूलक, उत्पादनशील हुन नसक्नु, विद्यालयहरुमा पूर्वाधार विकास नहुनु, प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालयहरुको कमी भएकोले नै राज्यले शिक्षामा लगानी गरेको बालुवामा पानी भएको छ ।
० निजी विद्यालयहरुले एसएलसीमा उत्कृष्टता ल्याउन पाठ्यपुस्तक अनुसार विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षा मात्र प्रदान गर्दछ भन्ने गुनासो छ नि ?
निजी विद्यालयहरुलाई पहिले पहिले चाहिँ त्यस्तो भन्थे । अहिले भने त्यस्तो होइन । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीले शिक्षामा परिणात्मक गुणात्मक बृद्धि गर्न कोसेढुंगा सावित गरेको छ । जसको उदाहरण हरेक वर्ष एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु हुन् या उच्च शिक्षामा भएको नतिजालाई आधार मान्नुस् । निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । घोकन्ते शिक्षा मात्र होइन, समयको मागलाई पछ्याउने शिक्षा दिन सफल भएको छ ।
० निजी विद्यालय नाफामुखी भएको र संचालकले चरम व्यापारीकरण गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ नि ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा अधिकांश निजी विद्यालयहरुले आर्थिक लगानी गरेका हुन्छन् । आफू एवं शिक्षा क्षेत्रमा खटिने बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यार्थीहरुको भविष्यमा खर्चेका हुन्छन् । विद्यार्थीले तिरेको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क नै विद्यालयको आम्दानीको स्रोत त्यहीबाट शिक्षक तलबभत्ता, प्रशासनिक कार्य संचालन, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने भएको हुँदा केही बढी शुल्क लिएको देखिए पनि विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तरलाई मूल्यांकन गरेर लिएको पाइन्छ भने केहीले अत्यधिक लिएको संचार माध्यममा आएर थाहा पाइएको छ । अधिक शुल्क लिनु जायज होइन । विद्यालय संचालन हुन सक्ने किसिमबाट शुल्क लिनुपर्छ । हाम्रो विद्यालयको हकमा भन्ने हो भने पनि शैक्षिक गुठीद्वारा संचालित विशुद्ध सामाजिक सेवा भावमा सञ्चालित हो । व्यक्तिगत नाफा जाने छैन । शिक्षक तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च धान्ने किसिमले मात्र शुल्क लिएका छौं । हामीले अहिलेसम्म नाफा बाँडफाँड गर्ने गरेको छैनौं । नाफा कमाउने उद्देश्य छैन ।
० निजी विद्यालयले बारम्बार शिक्षक परिवर्तन गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीको अध्ययनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भनिन्छ नि ?
निश्चय पनि हो । विद्यालय शिक्षकहरु परिवर्तन भइराख्नाले विद्यार्थीहरुको पढाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो निजी विद्यालयको कमजोरी हो । शिक्षक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई उचित तलब दिन नसक्दा यस्तो हुन्छ । काम अनुसारको दाम र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । समय सापेक्ष तलब भुक्तानी दिनुपर्छ । हाम्रो विद्यालयमा सरकारी सेवा सुविधा अनुसार नदिए पनि समयको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर तलब र सुविधा दिएका छौं । हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो किसिमबाट शिक्षक परिवर्तन भएको छैन । कुनै पनि निजी विद्यालयमा पटक पटक शिक्षक परिवर्तन हुनुहुँदैन ।
० अभिभावकहरुको ढाड सेकिने गरी अधिक शुल्क लिने तर शिक्षकहरुलाई भने काम अनुसारको दाम नदिने भनी शिक्षकहरु भन्छन् नि ?
कतिपय निजी विद्यालयमा त्यस्तो भएको सुनिन आएको छ । त्यस्तो प्रक्रिया हुन ठीक होइन । अभिभावकलाई बढी व्ययभार पर्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनु ठीक होइन । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई शैक्षिक सेवा सुविधा कुन किसिमबाट पु¥याएको छ, सरकारी नीति अनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ कि छैन, छैन भने कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षकलाई काम अनुसारको दाम उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नदिएमा विद्यार्थीको अध्ययनमा नकारात्मक असर पर्दछ । हाम्रो स्कुलले शिक्षकहरुलाई राम्रै पारिश्रमिक दिएको छ ।
० सरकारी स्केल सरह दिनुभएको छ त ?
हाम्रो स्कुल शैक्षिक गुठीद्वारा संचालन भएको हुँदा नाफाको बाँडफाँड नहुने हुँदा विद्यार्थीहरुबाट उठाएको शुल्क तलब भत्तामा नै खर्च गरिने र शैक्षिक सुधार र शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने तालिमको व्यवस्था साथै उचित पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । अझै पनि सरकारी स्केलको तलब सुविधा दिन भने सकिएको छैन ।
० निजी विद्यालयमा देखिएको समस्याहरु ?
निजी विद्यालययमा धेरै समस्याहरु छन् । जसमा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरु रहेका छन् । शैक्षिक समस्यामा शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्न सकिएको अवस्था छैन । यस्तो भएपछि राम्रो अवसर, सेवा सुविधा प्राप्त हुनासाथ शिक्षकहरु अन्यत्र जाने हुन्छन् । विद्यार्थीको पढाइमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसैगरी सामाजिक समस्याभित्र समाजमा निजी विद्यालयले दिएको पढाइका विषयमा चेतना फैलाउन कठिन छ । बुझाउन कठिन छ भने आर्थिक समस्या पझनै बढी छ । महिना पुगेपछि अधिकांश निजी विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन नै धौ धौ पर्छ । आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन त्यति नै आवश्यक छ ।
० निजी विद्यालयले कक्षामा राम्रोसँग नपढाउने अनि होस्टलमा राखी ट्युशन र कोचिङ कक्षा संचालन गरेर अभिभावकहरलाई आर्थिक व्ययभार थोपरेको भनाईप्रति के भन्नुहुन्छ ?
विद्यार्थीहरुलाई कक्षामा राम्रोसँग अध्यापन गराउनु नितान्त आवश्यक छ । विद्यार्थीहरु जति सक्दो कक्षामा नै मेच्युअर्ड हुन चाहन्छन् र कतिपय भएका पनि छन् । त्यति गर्दागर्दै कोही कम जान्ने कोही बढी जान्ने अवस्था हुन्छ । ती विद्यार्थीहरु जो कमजोर छन् तिनीहरुमा एकरुपता ल्याउन होस्टलमा राख्ने विषयमा टाढा टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरुको लागि हो भने ट्युशन र कोचिङ पढाउने सवालमा सबै विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट ल्याउन गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै विद्यार्थीलाई जान्ने बुझ्ने बनाउनको लागि ट्युशन र कोचिङ सञ्चालन गरिएको हो । अभिभावकलाई व्ययभार पार्ने कुनै मनसाय छैन ।
० तपाईंको विद्यालयका विशेषताहरु के के छन् त ?
शैक्षिक गुठी प्रतिष्ठान, विशुद्ध सामाजिक संस्था, नाफारहित संस्था, पूर्णतया अंग्रेजी तहबाट पढाई हुने, समय सापेक्ष व्यवहारिक शिक्षा दिनु, शिक्षकहरुलाई नियमित रुपमा तालिमको व्यवस्था गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने कार्य नै यस विद्यालयको विशेषता हो ।
० मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, अतिरिक्त शुल्क जस्ता अनेक शुल्कहरु तिर्दा तिर्दा सास्ती खेपेका अभिभावककै थाप्लोमा फेरि शिक्षा सेवा कर समेत तिर्नुपर्छ भनेर निजी विद्यालयका संचालकहरुले बखेडा निकालिरहेका छन् । उक्त कर त नाफाबाट नै तिरे भइहाल्यो नि होइन र ?
शिक्षा सेवा कर तिर्ने विषय विवादित नै छ । विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार संचालन भएको हुँदा राज्यको नियमानुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । हाल विद्यालयले शिक्षा सेवा कर लिन स्थगित गरेको छ ।
० शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन कसरी सम्भव छ ?
राज्यले शिक्षा नीति, शिक्षा नियमावली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विश्व बजारमा बिक्ने सीपमूलक, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने योजना निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति गरिनु हुँदैन । जुन सरकार आयो त्यसैको मनोमानी ढंगले नीति निर्माण गर्ने कार्यले शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षा प्रणाली लथालिंग भएको हो । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने सबैले सर्वसुलभ किसिमले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु जीवन उपयोगी शिक्षा मर्यादित नैतिक आचरण सहितको शिक्षाले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय, ग्रामीण भेगका नागरिकले सहजै किसिमबाट शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनु जरुरी छ ।
० अन्त्यमा के भन्नु छ कि ?
हाल निजी क्षेत्रले संचालन गरेको निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । महँगोको रुपमा लिएको छ । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले छुट्टै योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिाभवकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नियमित पठाउने, विद्यालय प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने, आफ्ना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा बेला बेलामा हेर्न आउने शैक्षिक अवस्था कस्तो छ सोको बारेमा हेर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । साथै संचार माध्यममार्फत् शिक्षासँग सम्बन्धित आफ्ना विचार राख्न दिनुभएकोमा तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।